शाकाहारी भए के हुन्छ? यस्ता छन् तथ्य | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य शाकाहारी भए के हुन्छ? यस्ता छन् तथ्य
शाकाहारी भए के हुन्छ? यस्ता छन् तथ्य
२०७४, ११ भाद्र आईतवार २०:३६
६. जैविक विविधतामा पनि केही मात्रामा खराब प्रभाव पर्नेछ। भेडा चराइले शताब्दियौंदेखि भूबनोटको स्वरुप/आकार दिन सघाएको छ। त्यसमाथि पशुपालन गर्न चाहनेले कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
तर, हामीले पोषणका केही वैकल्पिक खानेकुराले मासुलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले विश्वभर करिब दुई अर्ब मानिस कुपोषणग्रस्त भएको अनुमान गरिन्छ। खाद्यान्नको तुलनामा मासु र यसबाट उत्पादित खानेकुराबाट धेरै पोषण प्राप्त हुन्छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
Previous articleमुटु स्वस्थ राख्न बिहान नास्ता खानुस्,खाजा नखानेलाई २७ प्रतिशत बढि खतरा
Next articleमानसिक असन्तुलन हुनबाट जोगिने यस्ता ८ उपाय